Ihe ị ga -eme ma ọ bụrụ na nwatakịrị ahụ na -arịa bruxism | Bezzia
Ihe ị ga -eme ma ọ bụrụ na nwatakịrị ahụ na -arịa bruxism
Maria José Roldan | 25/09/2021 11:06 | Emelitere ka 25/09/2021 11:09 | Ndị nne
Ọ bụrụ na ị chọpụtala na nwa gị na -ata ikikere ezé mgbe ọ na -ehi ụra, ọ ga -ekwe omume na ị na -arịa ọrịa a na -akpọ bruxism. Ọ bụ ọrịa a na -ahụkarị karịa ka ị chere, na -emetụta otu ụzọ n'ụzọ anọ nke ọha mmadụ. Na mbụ, ọ dịghị mkpa ichegbu onwe gị, ebe ọ bụ na bruxism na -apụ n'anya ozugbo nwa nwere ezé na -adịgide adịgide.
N'isiokwu na -esonụ, anyị ga -agwa gị ihe gbasara bruxism na kedu nsonaazụ ọ nwere ike inwe gbasara ahụike nwa ahụ.
1 Gịnị bụ bruxism
2 Ihe ndị na -ebutekarị bruxism
3 Otu esi emeso bruxism
Gịnị bụ bruxism
Bruxism bụ nsogbu nke na -emetụta akwara nke ọnụ na nke nwere oke mkpụmkpụ ha, na -eme mkpọtụ mkpọtụ. Bruxism nwere ike bute mgbu n'isi, agba ma ọ bụ ntị. Enwere ụdị abụọ ma ọ bụ ụdị bruxism:
A maara dị ka centric, nke mejupụtara ịta ikikere ezé siri ike karịa nke nkịtị. Ọ nwere ike ime ma n'ehihie ma n'abalị.
The eccentric na -akpata ịta ikikere ezé ọ na -emekarị n'abalị.
Ekwesiri ighota na bruxism bụ ihe a na -ahụkarị na ezé mgbe ezé na -akpụpụta. Dịka iwu n'ozuzu, Nsogbu a na -apụ n'anya mgbe ezé eze na -adịgide adịgide.
Ihe ndị na -ebutekarị bruxism
Bruxism nwere ike ịbụ n'ihi ihe anụ ahụ ma ọ bụ nke uche.
Ọ bụrụ na ọ bụ n'ihi ihe gbasara mmụọ, bruxism na -apụta n'ihi nchekasị gabigara ókè na ndụ nwata ma ọ bụ n'ihi oke nchekasị.
Ihe na -akpata ya nwekwara ike bụrụ nke anụ ahụ, dị ka mpụta nke ezé ọhụrụ ma ọ bụ ọnọdụ adịghị mma ha. Ihe a niile pụtara na ha nwere ike ịta ikikere ezé ka nwata ahụ na -ehi ụra.
Otu esi emeso bruxism
Dị ka anyị kwurula n'elu, n'ọtụtụ ikpe, bruxism na -apụkarị n'onwe ya. Ọgwụgwọ ahụ dị mma naanị ma ọ bụrụ na ọ gaghị apụ ma kpatara nnukwu ike na ezé ma ọ bụ nnukwu mgbu n'ime ha.
Ọ bụrụ na nwata ahụ dị obere, tinye naanị efere plastik n'akụkụ elu wee si otú a gbochie ezé ịta ahụhụ nke ukwuu. Ọ bụrụ na ọtụtụ afọ, bruxism anaghị akwụsị, ọ ga -adị mkpa ịmalite ọgwụgwọ orthodontic ma ọ bụ orthopedic.
Ọ bụrụ na ọ tụgharịa na bruxism kpatara ihe gbasara mmụọ, ihe amamihe dị na ya ga -abụ iji usoro ntụrụndụ dị iche iche n'ime nwa ahụ iji belata nchekasị ma ọ bụ ọkwa nchegbu dịka o kwere mee. N'ihe gbasara anụ ahụ, a na -atụ aro ịmalite ọgwụgwọ dabere na physiotherapy nke na -enyere aka mee ka uru ahụ nke ọnụ kwụsị.
Na nkenke, echegbula onwe gị nke ukwuu ma ọ bụrụ na nwa gị na -ata ikikere ezé mgbe ọ na -ehi ụra. Ndị nne na nna kwesịrị ị atta ntị na ụdị nsogbu a na -amalite ma ọ bụrụ na ihe aka njọ. Iji belata bruxism a, ọ bụ ihe amamihe dị na ya ịgbaso usoro usoro ntụrụndụ nke na -enyere nwa ahụ aka ịbịa nwayọ n'oge ụra.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » Ndị nne » Ihe ị ga -eme ma ọ bụrụ na nwatakịrị ahụ na -arịa bruxism
Ị ma ọrịa ọrịa ọkpụkpụ kachasị?
Ndụmọdụ iji belata akara ukwu carbon anyị